Kana iri nguva yako yokutanga achifamba nechitima, hapana kupokana zvichava kutanga vakawanda. chokwadi, chero munhu akapihwa anofamba nechitima mukana akapenga zvachose pamusoro payo! Sei? Nokuti nakisa! Kusiyana rekuremekedza ndege Vatasvi, dzamira bhazi Tours, kana nzira-zvakare-ane mutoro anotasva nemotokari, chitima rwendo ngozi, nokukurumidza asi kusimba fadza uye rudo. Mumwe anogona kutaura kuti kufamba nechitima ndiko kusanganiswa chaiko kweVirginia Woolf kusavapo-kufunga uye kuita kwemazuva ano. Ah, muchaona wega kare.
Hatigoni nechokwadi uchawana kuti Ethan Hawke – Julie Delpy Train Journey mamiriro enyu okutanga chitima tasva (Oh, handeyi nazvo, tava zvose kuona uye swooned pamusoro The Before Trilogy, muchivande, tichitarisira tichava zvakafanana rudo nyaya kuitika kwatiri.) Kuvhuna kubuda goko yako rega zvakaitika kuitika. Vangani akangwara, kunakidza, uye mafaro Kukurukurirana uchataurei? Ruzivo uye kusvika kushamwaridzana nevanhu vane tsika dzakasiyana chinhu naka kunzwa! Hauzivi vangani dzakanaka shamwari iwe unenge kuvaka, mangani ma crushes auchazove nawo, kana kuti vangani hunakidze hunhu hwauchasangana. Kana iwe hausi kunyara, kuva wokutanga isununguke uye hurukuro kuvanhu ukaona zvinonakidza.
Kufamba mumapoka uye nemazuva akakosha lowers mutengo yekudyidzana kuti chitima tikiti (ehe, unogona chaizvoizvo kuwana dhisikaundi pamusoro tikiti yako, vanoti, Trenitalia kana ukaenda mberi kwevhiki). Izvo zvakare zvinokupa iwe mumwe munhu wekugovana ruzivo nazvo uye nekuona zvinhu kubva kune vamwe vanhu maonero. kuti, uye – kudhakwa mune imwe nyika yeEurope ndechimwe nani pakati vanhu vaunoziva kupfuura kuzviita Solo… tiri kutaura chokwadi, kana tiri kutaura chokwadi?
Nakidzwa yenyu chitima rwendo, zvipe mvumo yekuzorora, uye kumbundira zvese nezvenzira yako yechitima! Nzvimbo yakavimbika kwazvo yekuodha matikiti ako echitima ndeye saveatrain.com zvechokwadi, saka – tora movin '!
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, zvino tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-journey-4-tactics%2F%3Flang%3Dsn- (Mupumburu pasi kuona Embed Code)